Nexus ọhụrụ abụọ 2016 ga - etinye Snapdragon 821 chip | Gam akporosis
O nwere ike ịbụ na ekwentị 2016 821 abụọ ahụ ga - eji mgbaji ọhụrụ Qualcomm ọhụrụ Snapdragon XNUMX
Snapdragon 820 mgbawa abụrụla kpakpando processor maka imirikiti ekwentị dịka Galaxy S7, LG G5, OnePlus 3 ma ọ bụ Xiaomi Mi 5. Mgbawa nke egosiputa ike di uku gburugburu arụmọrụ, ike arụmọrụ na graphic ikike inye ihe kasị mma ka onye ọrụ na-ahọrọ a elu-ọgwụgwụ ndị ọzọ ọkara ma ọ bụ ala. Ihe na-akpali mmasị amaghị na emelitere ụnyaahụ na a ọhụrụ adianade do ke Qualcomm mgbawa repertoire.
Ọ bụ webatara mgbawa Snapdragon 821, CPU ga-eweta a Ọrụ 10% karịa ọ bụrụ na anyị atụnyere ya na 820. N’etiti ekwentị ndị ahụ chere na ha ga-enwe mgbawa ọhụụ a, ọ ga-ekwe omume na ngwaọrụ HTC Nexus abụọ ahụ nwere CPU ọhụrụ a n’olu ha amalitela ịda. Ya mere ma Sailfish na Marlin nwere ike iji Snapdragon 821 ọhụrụ nke na-abịa na arụmọrụ ka mma.
Nke a mgbawa, nke e internally kwuru na dị ka nlereanya MSM8996 Pro, Ọ bụ 10% ngwa ngwa karịa ugbu a 820. A obi umeala mmụba maka a nta mgbawa ma ọ bụrụ na anyị na-atụnyere ya ihe bụ na igba egbe nke 820. Ọ bụ kama a CPU na-achọ na-ebuli arụmọrụ na arụmọrụ ke ofụri ofụri, n'ihi na ihe anyị na- tupu a mgbawa na-abịa ịkọwa ihe 820 kemgbe.
Achọghị ikwenye ya ma ọ bụrụ na nke a ga-abụ mgbawa nke anyị ga-ahụ n'ime nke ngwaọrụ HTC abụọ ahụAgbanyeghị na ekwuputabeghị ọbịbịa Nexus ọhụrụ abụọ ahụ, ugbu a, a gaghị enwe nsogbu na igosipụta ha dịka anyị nwere ihe akaebe gọọmentị nke nhazi ọhụrụ ahụ. Otu n'ime ekwentị ndị ga-enwe mgbawa ọhụrụ a ga-abụ Rịba ama 7, ọ bụ ezie na ọ ga-adị na mbipute America na China, ebe ndị Europe ga-anọnyere ụlọ ọrụ Samsung mere.
Maka ekwentị abụọ ga-ekwuputa n'ime otu ọnwa ma ọ bụ abụọ, anyị nwere ike ikwu n’ụzọ doro anya na anyị ga-ahụ 821 na-enye omume ọma ya niile nye Nexus abụọ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Nexus » O nwere ike ịbụ na ekwentị 2016 821 abụọ ahụ ga - eji mgbaji ọhụrụ Qualcomm ọhụrụ Snapdragon XNUMX
Eserese nke ụdị ọgụ / agbachitere Pokémon nke ị ga - abụ onye isi na Pokémon GO
Ihe onyonyo ndị a na-egosi na gam akporo Wear smartwatches ga - ekwe omume site na Google